Akụkọ - Mmetụta Dị Mma nke Ike Igwe na gburugburu ebe obibi
Mmetụta Dị Mma nke Ike Ike anyanwụ na gburugburu ebe obibi
Gagharị na ike anyanwụ n'ọtụtụ buru ibu ga-enwe mmetụta dị ukwuu gburugburu ebe obibi dị mma. Otutu oge, a na-eji okwu gburugburu ebe obibi na-ezo aka na gburugburu ebe obibi anyị. Agbanyeghị, dịka ndị mmadụ, gburugburu anyị gụnyere obodo na obodo na obodo ndị mmadụ bi na ha. Gburugburu ebe obibi gụnyere ihe niile ndị a. Wụnye ọbụna sistemụ ike anyanwụ nwere ike ime ka enwere ngụkọta dị n'akụkụ niile gburugburu anyị.
Uru ọ bara na Ahụike
Nnyocha 2007 nke National Labour Energy Laboratory (NREL) kwubiri na ịnakwere ike anyanwụ n'ọtụtụ buru ibu ga-ebelata oke anwuru nke nitrous oxides na sọlfọ dioxide. Ha kwuru na United States nwekwara ike igbochi nsị 100,995,293 CO2 naanị site na iji GW 100 nke ike anyanwụ dochie gas na kol.
Na nkenke, NREL chọpụtara na iji ike igwe eme ihe ga - eme ka ọnụọgụ ole na ole nke ọrịa metụtara mmetọ, yana belata nsogbu nke nsogbu iku ume na obi. Ọzọkwa, nbelata ọrịa ahụ ga-apụta ịbụ obere ọrụ ọrụ na obere ụgwọ ahụike.
Uru dị na Ọnọdụ Ego
Dị ka US Energy Information Administration si kwuo, na 2016, nkezi ụlọ America na-ere ọkụ ọkụ ọkụ 10,766 awa (kWh) kwa afọ. Ọnụ ego ike dịgasị iche iche, site na mpaghara, na New England na-akwụ ụgwọ kachasị elu maka gas na ọkụ eletrik yana ịnwe mmụba pasent kachasị elu.
Nkezi ọnụahịa mmiri na-arịwanye elu nwayọ. Ka okpomoku zuru uwa na-ebelata nnyefe nke mmiri, ọnụ ahịa ndị ahụ ga-arị elu karịa n'ụzọ dị egwu. Igwe eletrik nke anyanwụ na-eji ihe ruru 89% obere mmiri karịa ọkụ eletrik na-enye ọkụ, nke ga-enyere ọnụahịa mmiri aka ịkwụsi ike.
Uru dị na gburugburu ebe obibi
Ike anyanwụ na-ebute ihe ruru 97% obere mmiri ozuzo acid karịa unyi na mmanụ, yana ruo 98% pere mpe eutrophication mmiri, nke na-eme ka mmiri oxygen ghara ịdị. Igwe eletrik na-ejikwa ala ala 80%. Dabere na Union of Concerned Scientists, mmetụta gburugburu ebe obibi nke ike anyanwụ dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere nke ike mmanụ ọkụ.
Ndị nchọpụta na Lawrence Berkeley Lab mere nyocha site na 2007 ruo 2015. Ha kwubiri na n’ime afọ asatọ ahụ, ike anyanwụ emepụtala ijeri $ 2.5 na nchekwa ihu igwe, ọzọ ijeri $ 2.5 na nchekwa ikuku ikuku, ma gbochie ọnwụ 300.
Agbanyeghi mpaghara, otu oge bụ na, n'adịghị ka ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ, a na-ekesapụta Mmetụta nke Ike Solar na ndị mmadụ n'otu ọkwa obodo ọ bụla. Humansmụ mmadụ niile chọrọ ikuku dị ọcha na mmiri ọ drinkingụ cleanụ dị ọcha iji bie ndụ ogologo ahụike. Site na ike nke anyanwụ, a na-eme ka ndụ dịwanye mma maka mmadụ niile, ma ndị ahụ bi n'ime ụlọ elu ma ọ bụ n'ụlọ obibi pere mpe.
Solar Street Light, Ọkụ Anyanwụ n'èzí, Solar Iju Mmiri Light, Anyanwụ Inverters, Ogige Uhie Mbara Igwe, Gbanyụọ Grid Inverter,